Ka Soo Saar Qoraalka Sawirka: Siyaabo Kala Duwan Oo Qoraalka Looga Soo Saaro Sawirka | Hal-abuurka Online
Ka soo saar qoraalka sawirka
Maalmahan, waxaa mahad leh horumarka saxda ah ee tignoolajiyada, waxaan suurtagelinay oo si fudud ugu shaqeynay qaabab la tafatiran karo. Ka soo saar qoraal sawir had iyo jeer waxay ahayd hawl la is waydiinayay ilaa daqiiqaddii u dambaysay.
Wixii u muuqday wax aan macquul ahayn ayaa suurta gal noqday. Maqaalkan, waxa aanu kugu dhufan doonaa mid ka mid ah casharrada halkaas oo aad la shaqayn doonto qaabka caanka ah ee JPEG. Kaliya maaha inaan ku soo bandhigno qaabkan, laakiin sidoo kale waxaan dooneynaa inaan sharaxno sida loo sameeyo ficilkan oo isku day inaad ku fududayso shaqadaada adigoo kaashanaya caawimaad yar.
1 Qaabka JPG
1.1 JPG ama JPEG
2 Sida qoraalka looga soo saaro sawirka
3 Tallaabada 1: Soo rar sawirka
4 Codsiyada lagu beddelayo sawirka qoraalka
4.2 Lens Microsoft Office Lens
4.6 Qoraal Fairy (OCR Text Scanner)
4.7 Sawir-qaade PDF ah
Hubaal inaad hore uga maqashay qaabkan, haddii kale, waxaanu kuu soo bandhigi doonaa adduunkiisa si aad u ogaato gacanta ugu horeysa, oo aad u fahamto dhammaan geeddi-socodka ka dambeeya.
Habka .JPG waa nooc ka mid ah faylka sida PNG, TIFF, TXT iwm. Farqiga u dhexeeya dhamaantood waa in qaabkan, Waa qaab si weyn loogu isticmaalo faylasha sawiradaSi kale haddii loo dhigo, aad bay muhiim ugu tahay waxa aan u naqaanno warshadaha dhijitaalka ah. Haddii aad naftaada u hurto aduunka sawir qaadista, qaabkani wuxuu ahaan doonaa wehelkaaga, tan iyo markii Waxay ku jirtaa inta badan aaladaha: kamaradaha, mobilada, iwm.
Magaciisa waxaa abuuray Kooxda Khabiirada Sawirrada Wadajirka ah, koox khubaro ah oo abuuray. jpg, .qaab loogu talagalay isku-buufinta sawirada, labadaba midab iyo cawl iyo tayo sare leh. Sidaa darteed, waxaan wajahaynaa habka ugu caansan marka la dhalinayo isku-buufinta sawirada sawirada. Dabcan, waa in la ogaadaa in heerka dhimista la hagaajin karo, taas oo dooro cabbirka kaydinta iyo tayada sawirka. Caadi ahaan wuxuu gaaraa isku-buufin hal ilaa toban ah oo leh khasaare muuqda oo tayada sawirka ah.
Isagoo ah fayl si weyn loo isticmaalo, wuxuu noqday mid fayras ah oo caan ka ah internetka. Isticmaalka weyn ee qaabka ayaa u ogolaatay browsers badan inay yeeshaan qaabkan marka la soo dejinayo ama la cusbooneysiinayo.
JPG ama JPEG
Waxaan ka hadalnay qaabka JPG-ga balse kamay hadalnay JPEG-ga, dhab ahaantii waa isku mid laakiin dhab ahaantii aad ayay u badan tahay in la jahawareeriyo oo la kala saaro. In kasta oo laga yaabo in aanay isku mid ahayn, haddana waxay wadaagaan waxyaalo badan oo ay iska shabahaan. dhab ahaantii waxay wadaagaan wax badan oo ay iska shabahaan marka loo eego kala duwanaanshaha.
Waxyaalaha ay iskaga mid yihiin labadan fayl waxa ka mid ah:
Labada faylba waxay u samaysan yihiin qaab raster halkii ay ka ahaan lahaayeen qaab vector.
JPG waxay u taagan tahay JPEG iyo Kooxda Khubarada Sawirka ee Wadajirka ah.
Labada nooc ee faylalka ayaa inta badan loo adeegsadaa sawirrada.
Labaduba waxay adeegsadaan habka isku-buufinta halkaas oo natiijadu tahay tanaasul tayo leh.
Dhammaadka habka cadaadiska, faylalku waa yar yihiin cabbirkooda.
Laakiin, waxay sidoo kale leeyihiin xoogaa kala duwanaansho yar, inkastoo aysan saameyn ku yeelanayn midba midka kale, waxay saameysay horumarinta tignoolajiyada. Tusaale ahaan:
Noocyadii hore ee Windows, taas oo ah, noocyadii hore, kaliya taageeri kara 3 xaraf kordhin. In kasta oo nidaamyada Mac iyo noocyada cusub ee Windows ay maanta furi karaan faylal wata kordhinta .jpeg, kombuyuutarradii hore loo isticmaali jiray ee lahaa nidaamka Windows-ka ee hore waxay ahayd inay soo gaabiyaan kordhinta .jpg
Hadda, inta badan barnaamijyada sawir-qaadista waxay adeegsadaan fidinta .jpg si looga fogaado jahawareer. Si kooban oo aan qodobkan u soo koobo. farqiga u dhexeeya labada fayl kordhin waa tirada xarfaha. Maanta waxaan isticmaali karnaa qaabka faylka .jpeg. Si kastaba ha ahaatee, nidaamyada hore, kaliya waxay ogolaadeen qaabka .jpg.
Sida qoraalka looga soo saaro sawirka
Talaabada ugu fudud ee lagu fulin karo habkan waa isticmaal waxa aan u naqaano Google Drive. Haddii aad leedahay akoon Google, waxaad heli doontaa qalabkan oo ka mid ah codsiyada kala duwan ee Google uu leeyahay.
Nidaamkan, ma noqon doonto lagama maarmaan in si dhab ah loo rakibo wax kasta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad furto sawir sidii inuu yahay dukumeenti qoraal ah. Iyo markaad sameyso Google Docs Kaliya maahan in la furo dukumeenti qoraal ah oo sawirka leh, laakiin sidoo kale waxay isku dayi doontaa inay soo saarto qoraal kasta oo laga yaabo inuu ku dhex jiro. Tani waxay u shaqeysaa labada sawir-qaadista bogga shabakadda iyo sawirrada oo aad u dhoofin karto jir ahaan.
Marka aad haysato Google Drive oo sawirkaagu diyaar yahay, waxaanu ku bilaabaynaa casharka.
Tallaabada 1: Soo rar sawirka
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono marka aan helno sawirka oo diyaar ah oo aan furno Google Drive, waa ku dheji sawirka aad rabto Google Drive. Waxa aad tan ku samayn kartaa adiga oo ka soo dhejinaya shabakadda, ama adiga oo si toos ah ula wadaagaya app-ka moobilkaaga. Habka dhib ma laha, kaliya soo geli sawirka aad rabto inaad soo saarto qoraalkiisa.
Marka xigta, gudaha Google Drive, waa inaad sameyso wax yar oo gujis ah midigta sawirka aad rabto inaad soo saarto qoraalkiisa, si aad awood ugu yeelatid inaad furto liiska macnaha guud ee meesha aad ka raadin karto ikhtiyaarka. Sawirku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee Google Drive uu taageero.
Marka aan midigta gujino sawirka, menu-ka furmaya waa inaad doorataa ikhtiyaarka Ku fur. Taasi waxay furi doontaa daaqad kale, halka waa inaad doorataa ikhtiyaarka Documents Google si aad sawirka ugu furto codsigan waddaniga ah ee dhammaan isticmaalayaasha Google Drive ay haystaan.
Marka codsiga ah Dukumiintiyada Google bilow, waxay furi doontaa sawirka gudaha dukumeenti, haddii ay ogaato inuu qoraal ku jiro, waxay u qori doontaa qoraal cad., halkaas oo aad awood u yeelan doonto inaad doorato oo aad nuqul ka sameyso sida aad jeceshahay si aad uga soo saarto habka aad u rabto.
Codsiyada lagu beddelayo sawirka qoraalka
Waa kuwan codsiyada qaarkood oo waliba ku caawin kara:
Qalabkani waa lagu dhex daray alaabaha kala duwan ee Google, oo ay ku jiraan Google Photos, kaas oo horay loogu sii rakibay aaladaha Android sidoo kalena lagala soo degsan karo, lacag la’aana dukaanka Apple-ka, ee iPhones. Si aad u isticmaasho, kaliya fur qalabka Fotos, ka dibna geli sawirka aad rabto in aad ku shaqeyso oo marka tan la sameeyo, rinji qoraalka si aad u koobiyeyso ka dibna ku dheji dukumeenti aad u socoto.
Google Lens waxa kale oo uu turjumaa qoraalada, waxa uu kaydiyaa kaadhka ganacsiga ee xidhiidhada,waxana uu ku daraa dhacdooyinka jadwalka,iyo hawlo kale. App-ka sidoo kale si gaar ah ayaa loo soo dejisan karaa waxaana loo isticmaali karaa in lagu aqoonsado walxaha adduunka dhabta ah. Nidaamku waxa uu baara boodhadhka, taallo iyo goobo.
Appkan Microsoft waxa uu ogaadaa qoraalka sawirka la doortay iyo ka dibna soo saar dukumeenti Word ama One Note oo ku dhejiya daruuraha OneDrive si hadhow, aan uga soo galno aaladda gacanta ama kumbuyuutarka. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad ku kaydiso qoraalka qaab PDF ah.
Codsigan, oo loo heli karo iPhone kaliya, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iskaan iskaankaro, kaydiso oo aad wadaagto dukumentiyada qaab pdf ama jpg ah. Intaa waxaa dheer, sida si fudud sawirka ugu beddel qoraal leh shaqada OCR, taas oo kuu ogolaanaysa inaad si fudud uga soo saarto oo aad wax uga beddesho qoraalka sawirkaaga. Sawir-qaadahan qoraalka ahi waxa uu aqoonsanayaa luqado badan.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sawirto qoraalada oo aad abuurto PDF ama ka soo saarto qoraalka sawir la sameeyay. Marka ay ogaato foomamka, waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhamaystirto.
Waa bog qoraalka sawirada ka beddela qoraal cad dhawr ilbiriqsi gudahood. Marka hore waa in aad soo geliyaan sawirka, ka dibna dooro luqadda qoraalka iyo ugu dambeyntii qaabka aad rabto in dukumeentigu u muuqdo.
Qoraal Fairy (OCR Text Scanner)
Sawirka u beddelaa qoraal, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka beddesho waxa ku jira iyo sidoo kale inaad koobiyayso oo aad ku dhejiso codsiyada kale. Goobtani waxay aqoonsanaysaa qoraalka in ka badan 50 luqadood.
Sawir-qaade PDF ah
Codsigan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad iskaan u qaaddo dukumentiyada, iyo sidoo kale inaad sawirada u beddesho qoraal. Waxa loo istcmaalaa in lagu sawiro, kaydiyo oo la wadaago dukumeenti kasta PDF, JPG ama TXT. Waxa kale oo ay haysataa ikhtiyaar ah in lagu daro saxeex dijital ah dukumentiyada.
Iyadoo horumarinta iyo abuurista codsiyo badan, way fududahay in la helo si loo awoodo in la fuliyo habkan kumbuyuutarka. Ka soo saarida qoraalka sawirka, maanta waxay noqotay hawl fudud oo ay heli karaan dhammaan noocyada dadweynaha. Sidoo kale, haddii habraacii aanu ku tusnay ay ku qanci waayaan. Waxaad had iyo jeer isticmaali kartaa qalabka aan soo jeedinay dhamaadka qoraalkan.
Waa codsiyo ay qaar badan oo ka mid ahi bilaash yihiin oo ay diyaar u yihiin nidaamyada Android iyo Apple labadaba. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa guji oo soo dejiso iyaga. Haddii aad leedahay akoonka Google, waxa kale oo aad geli kartaa codsiyadeeda badan oo qaarkood iyagana loogu talagalay hawlgalkan oo kale.
Marka la soo koobo, ka soo saarista qoraalka sawirku waa wax hore loo samayn karo oo farteena ku jira, hadday tahay nooca mobilada ee codsiga iyo goobaha kale ee qalabkan lagu isticmaalo. Hadda waa waqtigii aad tijaabin lahayd qalabka oo aad ogaan lahayd kuwa kale oo ku caawin kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Ka soo saar qoraalka sawirka